Farqiga u dhaxeeyay dadka diyaarada ku safra iyo dadka gaa,idka ku sarfa | CeelGardi News
Farqiga u dhaxeeyay dadka diyaarada ku safra iyo dadka gaa,idka ku sarfa
Halkan hoose waxaa ka muuqda 12 flight oo garoonka Mogadiahu ka kacayey 8 may inta u dhaxaysay 8:00 am illaa 10:00am. Labiyo tobankaa flight dhamaantood waa gobalka iyo degmooyinka Somalia ama koonfurta Somalia qofba siduu u yaqaan qaarbaaba Garoonka Mogadishu u Jira wax ka yar oo masaafo aan dhamayn 80KM. Lacagaha laga qaadaa waa lacago badan oo flight ka ugu yari waa $115 halka qaar yihiin $270. Runtii dadkani haddii dhulka ku safri lahaayeen ka ugu badan waxay bixin lahayeen $40 oo kaliya. Lakin sababta ugu weyn ee loogu safri waayey baabuurka oo ka jaban toban laab diyaarad “waad garanaysaan waxana weeye xaalad amni inkastoo dadkani jeclaan lahaayeen inay ku safraan qiimo jaban oo lagaba yaabo inbadani ay doorbido inay dhuka marto oo sii aragto meelo badan oo diyaaradi la sii marayn amaba Gaadhigiisa uu jeclaan lahaa inuu ku dawaafo” haddanna waqtiga iyo xaaladaa u sahali waayey oo ku sanduleeyey fuulidda diyaarad qaaliya.
Arinkani ma sahalana oo haddii lagu yidhaaho dhulka mari maysid ee waa inaad diyaarado u kala raacdaa Magaalooyinka Hargeisa, Gabiley, Borama, Saylac, Dacarbudhuq, lughaya, Berbera, Sheekh, Burco, Oodweyne, Caynabo, Buuhoodle, Laascaanood, Ceerigaabo, Badhan iyo Degmooyin kale oo badan. Maxaad filaysaa oo aan dhul lamari karin. Arinkan dhibtiisa waxaa dareemaya dadka dhibtani haysato illaahay haka dulqaadee waxaynu u qabankarnaa waa duco.
Haddaba waxaan waqtiyadan danbe arkayey dad baddan oo dhaliil uga dhiga Somaliland in garoonkii diyaaradaha ee Cigaal uu xidhmayo oo diyaaradihii ka gureen arinkan waxaa ku soo celceliya dhalinyaro badan oo qaarna Mogadishu joogaan qaarna aanay waligoodba arrag oo Hargeisa joogaan.
Marka garoon mashquulkiisa la qiimaynayo muhiimku maaha diyaaraddaha gobalada dalka ukala baxaaya ee waa diyaaradaha samaynaya international flights ka ee wadanka debedda uga baxaya.
ISBARBARDHIG: INTA DIYAARADOOD EE CAALAMIGAA EE LABADA GAROON KA KACA…
1. Ethiopia airlines oo iminka bilowday
1. Fly Dubia
2. Al Carabiya
3. Ethiopia airlines
4. Jabouti Airlines
Iswaydiintu waxa weeye ma jeceshahay in Somaliland laga joojiyo safarada dhulka ee u dhexeeya magaalooyinka oo diyaarado lagu bedelo si garoonka Hargeisa mashquul u noqdo oo maalintii boqol flight oo local ahi uga kacaan. Lacagta safarkuna u badatto dawladuna dakhli bandanna hesho…
Runtii waxaa maqaalkan igu kalifay mar aan maanta garoonka Mogadishu diyaarad ka raacayey ayaan xasuustay boarding gate oo flights ka diyaarkaa ku qoranyhiin iyo doodii walaaleheen ee ahayd garoonka Hargeisa ka garoowe ayaa ka mashquul badan…….